Xogta Shirkadda - Sichuan Zili Machinery Co., Ltd
Hal qayb oo ka mid ah Sichuan Zili Machinery Co., Ltd.
Sichuan Zili Machinery Co., Ltd, oo ku yaala Gobolka Sichuan, waxaa la aasaasay 2002. Waa saaraha xirfadle ah oo ku takhasusay naqshadaynta, soo saarista iyo qaybinta tayada sare ee TGF taxane rotary valves iyo TXF 2-way weeciyeyaasha loo isticmaalo budada iyo granules hababka gudbinta pneumatic.
Aqoon-is-weydaarsi toos ah buufinta budada ah
Waxaan leenahay kooxdayada R & D. Muddo sanado ah, oo ku saleysan cilmi-baaristeena iyo horumarinteena, waxaan nuugay tignoolajiyada wanaagsan ee aaggan gudaha iyo dibaddaba. Hadda tayada alaabtayadu wax badan ayaa kor u kacday. Gaar ahaan waalka hawada wareegta ee rotary-ga, iyo jiilka 3-aad ee weeliyayaasha Waxaan si buuxda u soo afjarnay ifafaale ka mid ah budada channeling, xannibaad, iyo xayiran. Tayada badeecaduna waxay gaadhay meel sare
Hadda alaabtayada waxaa si weyn loogu isticmaalaa hadhuudhka, cuntada, quudinta xoolaha, dawooyinka iyo warshadaha kiimikada hababka gudbinta pneumatic.
Waxaan ku guuleysanay jawaab celin wanaagsan oo ka timid macaamiisha adduunka oo dhan sababtoo ah alaabadayada qaab dhismeedka is haysta ayaa hoos u dhacay iyo hawlgal fudud.
Waqtigan xaadirka ah, waxaanu samaynay qorshahayaga cusub ee shanta sano ah, oo ku salaysan sii wadida horumarinta iyo soo saarida TGF taxane rotary valves iyo TXF laba-geesoodka valves, ku tiirsanaanta alaabta hadda jirta, si aan macaamiisha u siino cuntooyin kala duwan, budo, qayb. arrinta iyo sibidhka pneumatic gudbinta injineernimada xalalka macaamiisha.
Ku saabsan kooxdayada, tan iyo markii aan ku jirnay warshadda hawada rotary iyo 2 way weecisay waalka in ku dhow 20 sano. Shirkadeena waxay leedahay nidaamka horumarinta tignoolajiyada qaan-gaadhka ah iyo kooxda. Waqtigan xaadirka ah, alaabada valve qufulka hawada wareegta ah ayaa la cusboonaysiiyay ilaa jiilka sideedaad. Alaabtu waxay leedahay saxnaanta sare iyo saamaynta dabaysha oo ka fiican, waxaana ku amaanay macaamiishu dhowr sano.
Intaa waxaa dheer, sida macaamiil badan oo badan oo aan wada shaqeyno, ka hor iibka iyo kooxda adeegga iibka ka dib ayaa noqday mid aad iyo aad u qumman sannadihii la soo dhaafay. Marka macaamiishu baahi qabaan, waxaan dooran karnaa alaabada ku habboon baahida macaamiisha.
Marka macaamiishu ay la kulmaan dhibaatooyin guud, kooxdayada adeegga iibka ka dib ayaa bixin doona adeegyo hagitaan khadka tooska ah sida ugu dhakhsaha badan, oo ay u habeeyaan shaqaalaha adeegga iibka ka dib ee ugu dhow si ay wax uga qabtaan.
quudiyaha rotary, 3-Way weeciye Valve, Xakamaynta Elektarooniga ah, hawo xidhid, valve rotary, 3 Way Ball Valve,